अमेरिकाबाट आएको यस्तो इमेलले सर्वोच्च अदालतमा खैलाबैला, अब के होला ? — Sanchar Kendra
अमेरिकाबाट आएको यस्तो इमेलले सर्वोच्च अदालतमा खैलाबैला, अब के होला ?
काठमाडौं । अमेरिकाबाट आएको एउटा इमेलले सर्वोच्च अदालतमा खैलाबैला नै मच्चीएको छ । प्रधानन्यायाधीशको वहिर्गमन माग गर्दै इजलास ‘बहिस्कार’ गरिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई आएको इमेलले अदालतमा खैलाबैला मच्चीएको हो ।
अमेरिकाबाट सर्वाच्चकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले इमेल पठाएका थिए । उक्त इमेल पढ्दा पढ्दै केही न्यायाधीशले ‘स्टप इट’ भनेपछि गुपचुप राखिएको छ ।
असार २८ को फैसलाका लेखक समेत रहेका खतिवडाले ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न के के गरियो भन्दै गलत व्यक्तिको हातबाट सत्ता खोस्न संविधानभन्दा बाहिर गएर परमादेश गर्नुपरेको सम्मका आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
उनले लेखेको इमेल पढ्दा–पढ्दै रोकिएकाले सो इमेलको आधिकारिक डिजिटल कपी आनन्दमोहन भट्टराईसँगमात्र रहेको छ । न्यायाधीशहरुले नै ‘अब नपढ्नुस, यसलाई यहीँ क्लोज गरौं’ भनेपछि रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
खतिवडाको त्यो इमेल न्यायाधीशको नभएर सत्ता गठबन्धनका नेताले विपक्षी दलका नेतालाई गालीगलौज गरेको शैलीमा लेखिएकाले न्यायाधीशहरुले नै गुपचुप पार्न खोजेका हुन् ।
स्रोतले भन्यो, ‘खतिवडा श्रीमानको त्यो इमेल बाहिर सार्वजनिक हुँदा राजनीतिक रुपमा त ठूलो उथलपुथल नै हुन्छ, शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको समेत वस्त्र उत्रिने र त्यसले अन्ततः न्यायपालिकालाई ड्यामेज बनाउने हामीले ठहर गर्यौं ।’
त्यो इमेल पढ्न रोकेर आनन्दमोहन श्रीमानलाई फिर्ता लिनुस् भनेको एक न्यायाधीशले बताए । इमेलमा न्यायाधीशको न्यायिक मन भन्दा पनि राजनीतिक मन बोलेको र प्रधान न्यायाधीश तथा एमाले अध्यक्षविरुद्ध सीमाहीन आक्षेपहरु लगाइएको छ । यो सूचना चुहिएसँगै सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।